ကိတ်မုန့်က်ဘ် Browser ကိုအခမဲ့ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အင်တာနက်က Apps ကပ » ကိတ်မုန့်က်ဘ်ဘရောက်ဇာ
ကိတ်မုန့်က်ဘ် Browser ကို APK ကို
ကိတ်မုန့်သင့်မိုဘိုင်းဖုန်း reimagined ပိုကောင်းတဲ့ရှာဖွေရေးနဲ့ web browsing အတွက်အတွေ့အကြုံ, ပါ!ရှာဖွေရလဒ်မှတဆင့်ပွတ်ဆွဲပါ
အဘယ်သူမျှမကပိုနေတဲ့ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုစာမျက်နှာနှင့်ရလဒ်လင့်များအကြားကျော-and ထွက်ခုန်။ ကိတ်မုန့်၌, ကိုယ့်ကိုရှာနှင့်သင့်ရလဒ်များကို-စူပါလွယ်ကူပါတယ်မှတစ်ဆင့်ရှေ့သို့ပွတ်ဆွဲပါ။ ဒါဟာက်ဘ်ရှာဖွေရေးများအတွက် Tinder သို့မဟုတ် Snapchat နဲ့တူပဲ!သင့်ရဲ့ရှာဖွေရေး, ကိုယ်တော်၏လမ်း
သင်အကြိုက်ဆုံးကို search engine-Google, Bing သို့မဟုတ် DuckDuckGo ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထိုအကိတ်မုန့်အုပ်စုရှာရန်နှင့်အတူသငျသညျမြားကိုလညျးသငျသညျမွနျမွနျသငျသညျအမြားဆုံးဂရုစိုက်အကြောင်းအရာရှာတွေ့ကူညီပေးနေ, သတင်း, ဗီဒီယို, ပုံများ, နှင့်စျေးဝယ်၌သင်တို့၏အနှစ်သက်ဆုံးဆိုဒ်များစိတ်ကြိုက်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
"ဝဘ် surfing" ဟုအရာအခါသတိမရကြသလော အရည်အညွှန်း, အသစ်သောအကြောင်းအရာ-ကိတ်မုန့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာ၏စိတ်လှုပ်ရှားကြောင်းပွတ်ဆွဲခြင်းနှင့်အတူမိုဘိုင်းဝက်ဘ်ဘရောက်ဆာမှပျော်စရာသတင်းချပ်နှင့်စိတ်ကြိုက်ရှာဖွေရေး features တွေတတ်၏။
Web browsing ရဲ့အနာဂတ် CREATE ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီ
ကိတ်မုန့်ဖြန့်ချိပြီးကတည်းကကျနော်တို့ features တွေ, စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်မှုများနှင့်အသုံးပြုသူတုံ့ပြန်ချက်စွမ်းအားဖြင့်စိတ်ကြိုက်ရှာဖွေရေး options များဖြည့်စွက်, 40 + updates များကိုဖြန့်ချိပါတယ်။ ထွက်ရောက်ရှိဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကိစ္စကိုအများဆုံးကိုသင်တပ်ဆင်ထားရာကိုသိပါစေ!
Search & ပွတ်ဆွဲပါ
သင်အကြိုက်ဆုံးကို search engine ကနေရလဒ်တွေကိုတဆင့် FORWARD ပွတ်ဆွဲပါ။
pop-up BLOCKER က
သင့်ရဲ့ကြည့်ရှုခြင်းအတွေ့အကြုံကိုဖျက်ဆီးထံမှတဲ့ pop-ups ကိုရပ်တန့်။
built-in အေဒီ Block
ရုပ်ဖျက် 100% သွားပြီးတဲ့သဲလွန်စမပါဘဲရှာဖွေ - Chrome နှင့်အချို့သောအခြား browsers တွေထဲမှာ "privacy ကို" mode ကိုမတူဘဲကိတ်မုန့်ကျနော်တို့ရဲ့ဆာဗာများပေါ်တွင်သင်၏အမည်မသိ browsing history ကိုစုဆောင်းမထိခိုက်စေဘူး
သတင်းများ, ဗီဒီယိုများ, ပုံများ, နှင့်စျေးဝယ်အတွက်အကောင်းဆုံးက်ဘ်ဆိုက်များကိုဖြတ်ပြီးရှာပါ။ Group မှရှာဖွေမှုများက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အမိန့်မိမိစိတ်ကြိုက်။
အချပ်, ခေါင်းစဉ်-သတင်းများအားဖြင့်အုပ်စုဖွဲ့ထိပ်တန်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ collection များကို, Tech မှ, အားကစား, ဂိမ်းနှင့်အတူအကြောင်းကြား, Celebrity News, နှင့်ပိုပြီးနေပါ။
ကိတ်မုန့်အပိုဆု: သင်၏သက်တမ်း MULTIPLE ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုဖြတ်ပြီးမီးမောင်းထိုးပြကြည့်ဖို့စာမကျြနှာအကြားပွတ်ဆွဲ!
ကျွန်ုပ်တို့၏မူပိုင်-ဆိုင်းငံ့နည်းပညာသင်သည်သင်၏မိုဘိုင်း browsing အတွက်နှေးကွေးခြင်းမရှိဘဲစွဲငြိဖွယ်ရာ, content တွေကိုကြွယ်ဝအတွေ့အကြုံများမှတဆင့်ပွတ်ဆွဲပေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် SWEET ကောင်းသော
သမိုင်း, Bookmarks, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, Tab ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အများကြီးပို!
ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသနည်း အဟောင်းက default browser ကိုမြောင်းနှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအသုံးပြုသူများအကိတ်မုန့် Browser ကိုသူတို့ရဲ့ဦးစားပေးက Web Browser နဲ့ရှာဖွေရေး app ကိုလုပ်နေပါတယ်အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုပါ။ ယနေ့ကိတ်မုန့်ရယူပါ!
စမတ်ဖုန်းနှင့် app ကိုဒီဇိုင်းလုပ်တိုးတက်လာနေသော်လည်း, မိုဘိုင်းရှာဖွေရေးနှင့်မိုဘိုင်းဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ desktop ပေါ်မှာအတွေ့အကြုံကိုအတိတ်ပြောင်းလဲကြပြီမဟုတ်။ ကိတ်မုန့်ပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပိုမြန်, သင်ရှာနေတာရန်သင့်အားရမိုဘိုင်းဝက်ဘ် browsing စေတဲ့မစ်ရှင်အပေါ်ပါ!
Facebook က: facebook.com/thecakebrowser/
တုံ့ပြန်ချက် & ပံ့ပိုးမှု: feedback@cakebrowser.com
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & Conditions: cakebrowser.com/terms/
*** နယူး ***
ကျနော်တို့ကနောက်ခံ tab မှာ link တစ်ခုဖွင့်ဖို့စွမ်းရည်ကိုကဆက်ပြောသည်င့် (!!!)
ပုဂ္ဂလိက tab မှာပွင့်လင်း
တိုးတက်မှုပိတ်ဆို့ခြင်းကြော်ငြာ - လုံးဝပိတ်ဆို့ကြော်ငြာတွေဖုံးကွယ်အစားဗလာကြားနေရာလွတ်ထွက်ခွာ
တုံ့ပြန်ချက်ရှိသလား? feedback@cakebrowser.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးသို့မဟုတ်တွစ်တာ @cakebrowser အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကို DM ။
ကိတ်မုန့်က်ဘ် Browser ကို-မြန်, ပုဂ္ဂလိက, ကြော်ငြာ blocker, ပွတ်ဆွဲ
20.97 ကို MB
ကိတ်မုန့် Technologies က Inc မှ